Wararka - Xaaladda Hadda & Mustaqbalka Horumarinta Makiinadaha Cuntada 2021 -ka
Xaaladda Hadda & Mustaqbalka Horumarinta Mashiinnada Cuntada 2021 -ka
Maaddaama ay tahay warshad bixisa taageerada qalabka warshadaha cuntada, warshadaha mashiinnada cuntada ayaa sidoo kale helay dareen sii kordhaya. Iyada oo si joogto ah loo hagaajinayo baahida dadka ee dhaqanka cuntada iyo barwaaqada cuntada iyo warshadaha kale, tayada iyo badbaadada cuntada iyo cabbitaankuba waxay sidoo kale heleen feejignaan dheeraad ah dhammaan qaybaha nolosha. Isla mar ahaantaana, waxay si toos ah u wadday baahiyaha warshadaha mashiinnada cuntada ee khuseeya, sidoo kale waxay u tahay Shiinaha Suuqa warshadaha mashiinnada cuntada ayaa bixiya fursado horumarineed oo qiimo leh.
Falanqaynta rajooyinka horumarineed ee mashiinnada cuntada
Warshadaha cuntada ayaa kaalin muhiim ah ku leh dhaqaalaha qaranka. Iyada oo la hagaajinayo heerarka nolosha maadiga ah ee dadka, noocyada cuntooyinka kala duwan ee soo jireenka ah iyo kuwa soo baxaya ayaa sii kordhaya, warshadaha wax -ka -qabashada ayaa aad u kobcaya, ballaarinaya baahida gudaha ee mashiinnada cuntada iyo wadidda horumarinta suuqa mashiinnada cuntada. Maanta, warshadaha mashiinnada cuntada waxay muujinayaan horumar wanaagsan.
Xaaladda horumarinta mashiinnada cuntada ee 2021
Waqtigan xaadirka ah, soo saarayaasha mashiinnada cuntada gudaha ee xoogga leh waxaa ka go'an inay baaraan tiknoolojiyad sare, wax soo saar tayo sare leh iyo adeegyo lagu kalsoonaan karo. Waxay awoodeen inay xal u helaan dhibaatooyinka kala duwan ee wax-soo-saarka iyo khadadka wax-soo-saarka oo dhammaystiran, waxayna joogteyn karaan xiriirada iskaashi ee muddada-dheer la leh shirkadaha xirfadda leh ee la xiriira. Shirkado badan ayaa si firfircoon uga takhalusi kara ifafaalaha tiro yar oo alaab ah iyo waxyaabo farsamo oo hooseeya, waxayna ku horumarayaan jihada hawlo badan iyo hawlgal caqli leh si loo ballaariyo kanaallada suuqa.
Tusaale ahaan, Jump Machinery (Shanghai) Limited, oo ah unugga maamula Ururka Warshadaha Makiinadaha Cuntada iyo Baakadaha ee Shiinaha, mashiinka buuxinta yaanyada yaanyo ayaa ku guuleystay badeecadda Nooca Tayada Tayada Qalabka Farsamaynta iyo Khudaarta ee Shiinaha 2017 (MAYA: CFPMA-2017-05021), oo leh cilmi baaris madaxbannaan iyo horumarin kala duwan ee badeecadaha cusub iyo tiro ka mid ah shatiyada qaranka.
Meelaha kala duwan ee miro-dhalinta iyo mashaariicda kale ee macaanka casiir miro, shirkadeenu waxay leedahay iskaashi farsamo oo dhammaystiran oo ay la leeyihiin shirkadaha iskaashiga Talyaani, oo ay ku jiraan ka-hor-socod, tiknoolojiyadda jaban, saamaynta badan ee tamar-badbaadinta tamar-darrada, jeermis-diidka nooca gacmo-gashiga iyo qasnadda bacda weyn ee aseptic, iwm. Marka la eego arrintan, waxay gaadhay faa'iidooyin tiknoolajiyadeed oo aanay shirkadaha waddanigu la jaanqaadi karin. Habka waxsoosaarka qalabku wuxuu si adag ugu hoggaansamayaa heerka ISO9001, iyo geedi socodka oo dhan waxaa loo fuliyaa si waafaqsan heerka 5S. Shirkaddayadu ma aha oo kaliya inay sii waddo xiriirka iskaashi ee muddada-dheer leh Machadka Cilmi-baarista Midhaha Qaranka ee Akademiyada Shiinaha ee Sayniska Beeraha, Jaamacadda Shihezi, Jaamacadda Beeraha ee Waqooyi-bari, Jaamacadda Beeraha ee Huazhong, Jaamacadda Jiangnan, iwm, laakiin sidoo kale waxay dejineysaa iskaashi farsamo oo deggan iyo ganacsi leh Talyaani FBR, ROSSI iyo Iskaashiyada shirkadaha kale.
Shirkadu ma aha oo kaliya inay ku hayso booska hogaaminta xoog leh qalabka ketchup -ka caadiga ah iyo qalabka xooga leh casiirka tufaaxa, laakiin waxay sidoo kale ku kasbataa natiijooyin aad u fiican qalabka cabitaanka casiirka miraha kale, sida casiirka liinta, casiirka liinta xudunta, casiirka liinta, casiirka canabka, casiirka liinta iyo cas casiirka timirta, caanaha qumbaha, cabitaanka caanaha qumbaha, casiirka rummaanka, casiirka qaraha, casiirka xiisaha leh, casiirka sonkorta, casiirka tufaaxa, casiirka karamberiga, casiirka ferskenka, casiirka cantaloupe, casiirka babayga, casiirka buckthorn, casiirka strawberry, casiirka mulberry, casiirka cananaaska , casiirka wolfberry, casiirka cambe, casiirka kiwi, casiirka karootada, casiirka galleyda, casiirka khudradda cagaaran, casiirka guava, casiirka bayberry, casiirka blueberry, casiirka raspberry, casiirka pear -ka, casiirka loquat, casiirka squash, juuska lotus, qalabka juuska NFC, sare cabitaanka jeermis -dileynta, cabitaannada shaaha, shaah cagaaran, shaah madow, shaah oolong, shaah udgoon, shaah miro ah, shaah caano, casiir shaah oo xoog leh, budada shaaha, cabitaannada caanaha walnut, borotiinka khudradda caleemaha, caanaha yicibta, cabbitaannada badarka oo dhan, cabitaanno kaktus ah, cabbitaanno aloe;
Iyo fersken huruud ah oo qasacadaysan, boqoshaada qasacadaysan, suugada qasacadeysan ee qasacadaysan, liin qasacadaysan, tufaax qasacadaysan, isteroberi qasacadaysan, cananaaska qasacadaysan, digirta cagaaran ee qasacadaysan, caleemaha bamboo qasacadaysan, qajaarka qasacadaysan, radishes qasacadaysan, ketchup qasacadaysan, jeeriga qasacadaysan, dhalada pear, macaanka strawberry, macaanka blueberry, suugada tufaaxa, macaanka diirka liinta, macaanka kiwi, macaanka bayberry, macaanka cherry, macaanka karootada, macaanka aloe, macaanka mulberry, macaanka pear -ka, macaanka hawthorn, iyo qalabka kale ee qasaca khudradda iyo khudradda iyo qalabka macaanka;
Sidoo kale qalabka budada miraha, qalabka khamriga miraha, qalabka khalka miro iyo qalabka Enzyme, lycopene, carotene iyo qalabka soo saarida anthocyanin; geedi socodka si fiican ayaa loo fahmay, iyo adeegsiga farsamada enzymatic biological waa horumarsan tahay. Codsiga guusha leh ee ka badan 160 casiir miro ah iyo khadadka wax soo saarka macaanka ee gudaha iyo dibaddaba ayaa ka caawiyay macaamiisha inay helaan badeecado aad u fiican iyo faa'iidooyin dhaqaale oo Wanaagsan.
“Kor -u -qaadista wax -soo -saarka caqliga leh ee mashiinnada cuntada iyo ka -faa'iideysiga kuwa caafimaadka qaba horumarinta aayaha aadanaha ”waa yoolkii aan soo wadnay. Jump Machinery (Shanghai) Limited ayaa diyaar u ah inay gacmaha isula shaqeeyaan dhammaan saaxiibbada si loo abuuro ammaanta ee qalabka cuntada ee Shiinaha!